warkii.com » Jurgen Klopp Oo Dib Isaga Weeraray Frank Lampard Una Sheegay Inuu Barto Sida Loo Hadlo & Super Frank Oo Isna Hadlay
Jurgen Klopp Oo Dib Isaga Weeraray Frank Lampard Una Sheegay Inuu Barto Sida Loo Hadlo & Super Frank Oo Isna Hadlay
Jurgen Klopp ayaa difaacay shaqaalihiisa tababarka isagoo sheegay in hadalkii Frank Lampard ee ahaa in Liverpool ay isla weyni muujiyeen inuu ahaa xadgudub.
Tababaraha Chelsea ayaa la arkaya isagoo hadalo carro leh iyo aflagaado ah ku oronaya Klopp iyo caawiyihiisa intii ay socotay kulankii Premier League ee Anfield.
Lampard ayaa ka carooday go’aankii uu garsoore Andre Marriner ku ciqaabay Mateo Kovacic ka dib qalad uu ku galay Saido Mane iyadoo Trent Alexander-Arnold uu dhaliyay laadkii xorta ee la dhigay.
Caawiyaha tababaraha Reds Pep Lijnders ayaa u muuqday mid ka careysiiyay Lampard, taasoo keentay in ciyaarta ka dib uu Lampard sheegay in Liverpool aysan isla weyni muujinin mar haddii ay horyaalka ku guuleysteen.
Laakiin Klopp ayaa ka carooday hadalkaas isagoo yiri:
“Wax sidaas oo kale ah iguma dhihi kartid” ayuu Klopp ku sheegay shirkiisa jaraa’id ee maanta ee ka hor kulanka ay Axada u safrayaan Newcastle.
“Ma nihin kuwa isla weyn. Frank wuxuu ku jiray xaalad tartan, waan ixtiraamayaa taas. Dheh waxaad doonto waqtigaas, waa dareen dhab ah, wuxuu u yimid inuu badiyo.
“Laakiin waxaa qasab ah inuu barto sida loo hadlo ciyaarta ka dib. Marka seeriga uu yeero waa qalad inuu sidaas u hadlo. Marka aad tahay qof isboorti, seeriga marka uu yeero waa inaad xirta buuga, ma uusan sameynin sidaasi, daacadiina ma jecli sidaas.
“Sababta aan hadda u hadlayo waxay tahay isaga ayaa hadlay ciyaarta ka dib”
Lampard ayaa sidoo kale ka jawaabay muuqaalka laga duubay isagoo aflagaadeynaya Klopp iyo caawiyihiisa, wuxuuna shirkiisa jaraa’id ee maanta ku sheegay inuu ka qoomameynayo dhaqankiisa.
“Waan arkay muuqaalka, waan joogay halkaas. Luqada aan adeegsaday waan ka qoomameynayaan sababtoo ah waxaa ii jooga labo gabdhood oo yaryar oo baraha bulshada isticmaala.
“Laakiin kama qoomameynayo xamaasadii aan ku difaacay kooxdeyda. Si ka duwan ayay aheyd inaan u la macaamilo laakiin wararka qaar ee sheegaya inaan ka carooday dabaaldegooda, taasi xaqiiqda waa ay ka fog tahay. Waxay u dabaaldegi karaan gool walba…..
“Khamri ayaan la cabi lahaa Jurgen Klopp ciyaarta ka dib, laakiin waxaa jiray dad xadgudub sameeyay oo aan aheyn Klopp.
“Waan ka qoomameynayaa luqada aan adeegsaday laakiin hore ayaan uga socon doonaa”